Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ka Hadashay Soomaalida ku Xiran Caalamka – Radio Daljir
May 31, 2017 6:06 b 0
Maaddaama uu ololuhu sii xoogeysanayo, mararka qaarkoodna ay ka hadlayaan dhinacyo aan ahayn xog ogaal buuxa, ayaan goostay in aan soo bandhigo xogta hadda suurta-galka ah in aan la wadaago dadweynaha.
Waa dadaal ay waddo Dowladda Soomaaliya laakiin aan weli la soo geba gebeyn.
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Seychelles arrinta ugu weyn ee uu ila soo qaaday waxay ahayd nabadgelyada badda noo dhexeysa iyo wadashaqeynteenna mustaqbalka.
Ka dib markii aan uga warramay isbeddelka dalka ka dhacay, Aniguna arrinta ugu weyn ee aan ku soo qaaday waxay ahayd Maxaabbiis Soomaali ah oo ku xiran Seychelles.
India, Safaaradda Soomaaliyeed ee New Delhi iyo Xeer Ilaalinta Qaranku waxay qabteen Qareen u dooda mid kasta oo ka mid ah Maxaabbiista Soomaaliyeed ee ku jira xabsi ku yaalla Mumbai.
Safaaradda Soomaaliya waxaa kale oo ay u asteysay mid ka mid ah Diblomaasiyiinteedu in uu tago Mumbai oo 1400 km u jirta New Delhi mar kasta oo Maxkamad la soo taagayo mid ka mid ah boqol iyo dheeraadka Maxaabbiista Soomaaliyeed ah.
maanta waxaa jira dhowr kulan oo Muqdisho iyo New Delhi loo ballansan yahay mowduucan.
Laba ka mid ah Dowladaha Saddexda ah ee aan xusay Ethiopia, Seychelles iyo India waxaan isla meel dhignay in maxaabbiista Soomaaliyeed ee dalalkooda ku xiran lagu soo wareejiyo gacanta Dowladda Soomaaliya.
Dalka kale waxaa noo billowday xiriir aan ku rajo weyn nahay in aan ka miro dhalin doonno mar dhow.
Shalay oo u dambeysay waxaan farriin ka helay saddexda Dowladood middood, farriintaas oo ah mid yididdiilo hor leh I gelisay.
Howshani hadba heerka ay mareyso ee in la sheego aanay wax u dhimi karin furdaaminta iyo marka ay geba-gebo tahay waan la wadaagi doonnaa dadweynaha Soomaaliyeed.
Warkaan waxaa uu kasoo baxay Wasaaradda Arimaha dibadda Soomaaliya